राधा चौधरीको घटनाले नेपाली समाजको एउटा सत्यलाई सचित्र बाहिर ल्याइदियो « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
राधा चौधरीको घटनाले नेपाली समाजको एउटा सत्यलाई सचित्र बाहिर ल्याइदियो
लेखक : हेमन्त गिरी ( हाल जापान )
कैलाली घटनाको भिडीयो कसले खिच्यो,किन खिच्यो,भिडीयो खिच्नेले राधा चौधरीको उद्धार र मद्दत किन गरेन ? आदि तपशिलका विषय हुन सक्छन । तर उक्त भिडीयोले नेपाली समाजको एउटा सत्यलाई सचित्र बाहिर ल्याइदियो जसको बारेमा हामीले सुनेका मात्र थियौं, देखेका थिएनौं ।
आधुनिक संचारको विकास संगै सामाजिक संजालको ‘पावर र प्रभाव’ यस्तो बढेको छ कि ठूला ठूला आन्दोलन संजाल बाट नै छेंडिन थालिएका छन । कैलाली घटनाको भिडीयो आउनु,सामाजिक संजाल मार्फत सरकार र सुरक्षा निकायलाई दबाब पुग्नुलाई मैले समाज विकासको एउटा कोशे ढ़ूँगो मानेको छु ।
‘पढेलेखेको छु,कमाएको छु,सहरमा वा विदेशमा बसेको छु’ भनेर गमक्क पर्ने र सामाजिक संजाल नियमित प्रयोग गर्नेलाई विभिन्न कटाक्ष गर्ने ‘वरिष्ठ ज्यू’हरुलाई कैलाली घटनामा सामाजिक संजालको प्रभावकारीता बाट गजबको ‘दनक’ पुगेको मैले महसूस गरेको छु ।
अचेल अधिकांशको हातहातमा भिडीयो/फोटो खिच्न मिल्ने,आवाज रेकर्ड गर्न मिल्ने मोबाइल छन । समाजमा केही गलत हुँदैछ र त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ भने त पहिले त्यो प्रयास गर्नुहोस । होइन,बोलेर वा प्रतिवाद गरेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिम हुने जस्तो छ भने चाहिं चुपचाप सके भिडीयो र फोटो, नसके आवाज रेकर्ड गरेर सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरिदिनुहोस ।
यस्तो तपाइँ आफ्नो गाऊँ टोल देखि लिएर विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो काम गर्दा अत्यन्त सतर्कता अपनाउनुहोला,ताकि तत्काल तपाइँलाई कुनै जोखिम नहोस । कैलाली घटनाको भिडीयो कसैले नखिचेको भए सायद यो घटना यत्तिकै दबेर जान्थ्यो समाजमा !
पत्रकार आउला र खिचिदेला,प्रहरी आउला र न्याय देला,सरकार आउला र सब ठीक गरिदेला भनेर बस्नुभयो भने त पंचायत ढाले पछिका तीन दशक यता जसरी बस्नुभयो त्यसै गरी अझ कैयौं युग बस्न बाध्य हुनुहुनेछ । म आफूबाट यी काम सुरु गर्ने प्रण गर्छु,तपाइँ पनि गर्नुहोस ।